Jaipur Litfest any London 2019: Tigers mankany Billionaires
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Jaipur Litfest any London 2019: Tigers mankany Billionaires
rita-1-The-Billionaires-Mijery-at-the-Indian-Elite-James-Crabtree-and-Avi-Singh-in-resaka-miaraka amin'i Mukulika-Banerjee.-Sary- © -Rita-Payne
Ankehitriny rehefa tapitra ny Fetiboky ny literatiora any Jaipur (JLF) any Londres, mila andro vitsivitsy ny olona iray hisaintsainana ny zavatra nianarany tamin'ny faran'ny herinandro mahery tamin'ny filana hevitra sy fifanakalozan-kevitra momba ny lohahevitra mahaliana. ZEE JLF ao amin'ny British Library any London dia nanjary orinasa matanjaka ary raisina an-tanan-droa amin'ny kalandrie isan-taona any UK. Ny fetin'ny literatiora, izay nipoitra tao Jaipur folo taona lasa izay ho fankalazana tsy manam-paharoa amin'ny fanoratana momba an'i Azia atsimo, dia nanitatra ny fanatontosana an'ireo fanontana iraisam-pirenena niely nanerana ireo toerana maro karazana toa an'i Belfast, Houston, New York, Colorado, Toronto, ary Adelaide. Ireo mpitia teny sy haisoratra dia afaka mandositra ny adin-tsaina amin'ny andavanandrom-piainany handrenesana mpanoratra malaza miresaka momba ny bokin'izy ireo ary hifanakalo hevitra momba ireo olana izay manadinika antsika rehetra ary hamakafaka ny dikan'ny zava-nitranga ara-tantara.
ZEE JLF dia fankalazana mahafinaritra ny literatiora, tononkalo, dihy, zavakanto ary fanatanjahantena. Hanampy teny iray hafa hamaritana ny ZEE JLF any London aho amin'ity taona ity - mampionona. Ny anton'izany dia androany, rehefa miharihary amin'ny hafatra feno fankahalana amin'ny haino aman-jery sy amin'ny kabary isan'andro, dia nampionona ny mahita fa mbola misy olona mino ny fahalalahana maneho hevitra, ny firindrana ary ny pluralisme. Na dia amin'ny adihevitra sy dinika miaraka amin'ireo mpandahateny izay mitazona mafy ny fomba fihevitry ny mpanohitra aza, dia somary sivily ny feo ary tsy niditra tamina fanafihana manokana ratsy toetra toy ny mahazatra amin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra maro.
Ny zoma JLEE andiany fahenina ao amin'ny British Library dia natomboka tamin'ny zoma niaraka tamin'ny lahateny fanokafana mitondra ny lohateny hoe "Imagining Our Worlds", natolotry ny talen'ny Festival Co-director Namita Gokhale sy William Dalrymple, Festival Producer ary ny talen'ny fitantanana zava-kanton'ny ekipa Sanjoy K Roy, Lehiben'ny tranomboky britanika Roly Keating mpanatanteraka, ary ny komisiona avo any India any UK Ruchi Ghanshyam.
Nilaza i Gokhale fa nandray anjara tamin'ny “zavatra mampiova zavatra” ny Fetibe, izay mitranga any India ankehitriny izay misy aingam-panahy ny tanora ao amin'ny firenena hihaino ny sasany amin'ireo saina tsara indrindra any India - "Io no toerana ieritreretan'i India amin'ny feo avo", hoy izy. Nihiaka i Dalrymple fa zavatra hafahafa tokoa ny nijery ny fitomboan'ity Festival ity, tamin'ny fanasongadinana fa nahazo dian-tongotra iray tapitrisa mahery izy tamin'ny fanontana vao haingana tao Jaipur. Roy dia nanaiky ny fandraisan'anjaran'ny literatiora amin'ny famoronana fiaraha-miory sy fitoviana eo amin'izao tontolo izao, rehefa nandinika fa ny literatiora dia miombona amin'ny tontolon'ny fizarazarana mihombo ankehitriny. Keating, tena nankasitraka ny fiaraha-miasa teo amin'ny British Library sy ny Festival, dia nilaza fa “tsy afaka akaiky kokoa izany.” Ghanshyam naneho ny fomba mampivelatra ny zava-miseho toy izany amin'ny fahatakarana ny toerana sy ny olona amin'ny fankalazana ny boky sy ny mpanoratra ary ny "fiainana mihitsy."
Ny fahaverezana. Sary © Rita Payne
Ny kabary ifotony, "Of Cities and Empire," dia nataon'i Tristram Hunt, talen'ny V&A ary solombavambahoakan'ny Asa teo aloha, izay niresahany ny bokiny, "Ten Cities that Made an Empire." Hunt dia niresaka ny fanovana ny lahateny natao momba ny fanjanahantany farany teo: "Ny loza izao dia rehefa miditra amin'ny fiteny fitakiana sy ny fialantsiny ofisialy isika dia nihalalaka ny toerana hanaovana fitsarana ara-tantara. Tokony hitsahatra tsy hanakaiky ny fanjakana Empire isika amin'ny lafiny tsara na ratsy ary hieritreritra an-tsaina sy hitadidy momba ny mifanohitra amin'izany, satria maro amin'izy ireo no mbola miaraka amintsika. ”
Tao amin'ny fifanakalozan-kevitra taorian'izay dia niresaka momba ny bokin'i Hunt ny mpanoratra sy mpahay tantara Shrabani Basu miaraka amin'ny fanjakana feno voninahitra an'i Shashi Tharoor. Mikasika ny hetsika vao haingana tamin'ny famongorana ny tranombakoka, Hunt dia niresaka momba ny herisetra ara-politika taloha sy ny tsy fitoviana ara-toekarena ankehitriny izay manodidina ny fananganana ireo tahiry ireo. Tharoor dia nanolo-kevitra fa momba ny zavatra manan-tantara maro toy ireny dia naseho tamina tranombakoka nefa tsy ekena ny zava-nisy teo amin'ny fanjanahan-tany.
Toy ny mahazatra dia fanamby ny manapa-kevitra hoe iza no fivoriana hanatrehana. Ny safidy dia lehibe sy sarotra satria matetika dia samy hafa ny fivoriana samy hafa tadiavin'ny olona iray. Ny fironana dia ny manintona amin'ny fotoam-pivoriana amin'ny lohahevitra izay misy olona liana manokana. Niavaka ny iray tamiko satria io dia niresaka olana iray izay tena zava-dehibe iankinan'ny aintsika - The Vanishing - izay niarahan'ireo mpiaro ny tontolo iainana, Prerna Bindra, Ruth Padel, ary Raghu Chundawat, niresaka tamin'ny mpanoratra sy mpanao gazety, John Elliott. Niresaka ny fifandanjana mampivadi-po eo amin'ny zanak'olombelona sy ny natiora miaraka amin'ny ala mihena izy ireo satria amidy ho an'ny fampandrosoana miaraka amina fiantraikany eo amin'ny bibidia. Manodidina ny zato taona lasa izay, tombanana ho 100,000 2010 ny tigra dia, nefa tamin'ny 95, namoy ny 60% mahery tamin'ny tigra dia eran'izao tontolo izao isika noho ny fanjonoana sy fatiantoka onenana. Raha ny tranga misy an'i India, izay misy ny 2,200% -n'ny tigra dia, ny ezaka fiarovana dia nahitam-bokatra tamin'ny isa XNUMX ankehitriny. Na izany aza, tsy afaka mionona ny olona. Nampihetsi-po ny nandre an'i Ruth Padel fa rehefa nilaza ny ahiahiny momba ny fanjavonan'ny bibidia any India amin'ny mpanao politika indiana zokiolona izy, ny valinteniny tamim-panesoana dia ny tsy fananan'ny biby dia. Nasongadiny fa ny fisian'ny tigra dia famantarana ny ala mahasalama. Raha tsy misy ala, izay ny havokavitr'izao tontolo izao, dia hisy vokany ratsy eo amin'ny tontolo iainana sy ny zanak'olombelona.
Efa manatrika ny fiatraikany ratsy manimba ny tontolo iainana vokatry ny asan'olombelona isika. Niaiky ireo mpandahateny fa ny olana lehibe dia ny fitondrana ireo vondrom-piarahamonina eo an-toerana izay mety ho novonoin'ny bibidia na mety nanafika ny tenany ny biby fiompin'izy ireo. Nisy ny nanolo-kevitra fa ny vahaolana dia ny fanolorana onitra ny olona eo an-toerana na ahafahan'izy ireo mahazo tombony ara-bola amin'ny fizahan-tany. Nanaiky ihany koa ireo mpandahateny fa ny fizahantany ara-tontolo iainana no lalana mandroso ary azo atao ny mitondra fanovana haingana miaraka amin'ny politika mety.
Fandraisana fandraisana ankavia sy havanana - William Dalrymple, Namita Gokhale, Sanjoy Roy ary Matt Reed, CEO, Aga Khan Foundation UK. Sary © Rita Payne
Fihetsiketsehana ny fahasamihafana amin'ny lohahevitra noresahina tamin'ny fivoriana tao amin'ny “The Billionaires: Mijery ny Elite Indiana James Crabtree sy Avi Singh” nifampiresaka tamin'i Mukulika Banerjee. Crabtree, mpanoratra ny “The Billionaire Raj - A Journey Through the New Gilded Age”, dia niresaka tamim-pifaliana ny fihaonany akaiky tamin'ireo mpanankarena be any India, toa ny Ambanis sy Vijay Mallya, nandritra ny fikarohana ny bokiny. Ny fikasany dia ny hahalala hoe iza izy ireo, ny fomba hahazoany ny volany, ary ny zavatra eritreretin'izy ireo momba ny tenany. Nilaza i Crabtree fa saika izy ireo dia nahatsiaro nampijaliana tamin'ny fampahalalam-baovao sy ny tsy fahitany ny fandraisany anjara tamin'ny fahombiazana ara-toekaren'i India. Mihabetsaka ny mpandraharaha no mividy trano fampitam-baovao mba hifehezana ny fomba fahitan'ny besinimaro azy.
Ny sabotsy dia nivory ny mpijery tamina fotoam-pivoriana nanerana ireo toerana kely 3 amin'ny fetibe. Nandritra ny fotoam-pivoriana "The Gene Machine", Nobel Laureate sy ny filohan'ny Royal Society Venki Ramakrishnan dia niresaka momba ny bokiny vao haingana niaraka tamin'i Roger Highfield avy amin'ny Science Museum any London. Ramakrishnan dia nanamarika fa raha tiana hiroborobo ny siansa dia tsy maintsy mamela sy mamporisika ny fahalalahana maneho hevitra sy maneho hevitra izany.
Tao amin'ny "Masala Shakespeare", Jonathan Gil Harris dia niresaka momba ny bokiny vaovao izay mankalaza ny sokajy sinema Hindi malaza amin'ny faran'ny taona 1970/80: ireo mpihom-pialana olona nitsoaka nantsoina hoe "sarimihetsika masala," satria nifangaro tamin'ny zava-mahatsikaiky tamin'ny hatsikana, zava-misy amin'ny zava-misy. -ny hetsika eo an-tampony, voatanisa rehetra miaraka amin'ny fanazaran-kira sy dihy. Ny mpanoratra dia nanisy tsipika mazava avy tamin'ity timestamp ity niverina tany Shakespeare, izay ny fiteny mamorona dia kolontsaina trans-mitovy amin'ny film masala.
Ny fotoam-pivoriana "The Islamic Enlightenment: Faith and Reason" dia nahita fifanakalozan-kevitra teo amin'i Christopher de Bellaigue, mpanoratra sy mpanao gazety iray izay niasa be nanerana ny tontolon'ny Silamo, sy ny Mpandrindra ny Festival Festival William Dalrymple, momba ny lohahevitra misy eo amin'ny finoana sy ny antony manerana ny ny tantaran'ny tontolon'ny silamo. Nanasongadina ny fanovana ara-tsosialy ara-tsosialy, ara-politika ary ara-teknolojia i De Bellaigue izay nitranga nandritra ny tantara maoderina tany am-boalohany sy ny fifanakalozana nisy teo amin'ny tontolon'ny Silamo sy ny tontolo Andrefana.
Tao amin'ny “The Begum”, ny mpikaroka, Deepa Agarwal, Namita Gokhale, Tahmina Aziz Ayub, ary Muneeza Shamsie dia niresaka tamin'ny moderator Maha Khan Philips momba an'i Begum Ra'ana Liaqat Ali Khan, ilay Ramatoa Voalohan'i Pakistan tamin'ny tapaky ny taonjato faha-20 - mafana fo iray , feminista, mahaolona, ​​akademia, diplaomatika, ary filantropista ary reny. Tao anaty boky vaovao, niara-nivory tamin'ny kolontsaina kolontsaina ny mpanoratra Pakistaney Tahmina Aziz Ayub sy ny mpanoratra Indiana Deepa Aggarwal. fiaraha-miasa eo amin'ny sisintany mba hitantara ny tantara mahasarika an'io sary manan-tantara io.
Ny fotoam-pivoriana hafa tamin'ny asabotsy dia nahitana: "Sangan'asan'ny kanto indiana ho an'ny orinasa East India" (Malini Roy, Yuthika Sharma, Katherine Butler Schofield, ary Rosie Llewellyn-Jones amin'ny resaka nifanaovana tamin'i William Dalrymple); "Nalam-baraka i Eva: Ny tsy fahombiazan'ny vehivavy amin'ny rariny" (Helena Kennedy, Avi Singh, ary Sunita Toor raha niresaka tamin'i Bee Rowlatt); "Tagore and the Bengal Renaissance" (Reba Som sy Bashabi Fraser nifampiresaka tamin'i Somnath Batabyal); "Ny teny rehetra ananantsika" (Anjali Joseph, Lijia Zhang, ary Romesh Gunesekera amin'ny resadresaka nifanaovana tamin'i Catharine Morris); "#Tharoorism" (Shashi Tharoor raha miresaka amin'ny Pragya Tiwari); "Mallika Victoria: Empress of India" (Miles Taylor sy Shrabani Basu amin'ny resadresaka nifanaovana tamin'i Vayu Naidu); "Fihaonana miaraka amin'ny sora-tanana mahavariana" (Christopher de Hamel natolotr'i William Dalrymple); ary "Amritsar sy ilay marary mpamono olona" (Anita Anand sy Kim A. Wagner amin'ny resadresaka nifanaovana tamin'i Navtej Sarna).
Ny sasany milaza fa ny fiarahan'ny hetsika malaza miaraka amin'ny vondrona haino aman-jery ZEE dia mitoky amin'ny fantsom-baovao voarohirohy ho nanao tatitra momba ny fahalotoana. Saingy, tsy azo lavina fa ny Festival Literatiora Jaipur any India dia trangam-literatiora manerantany, nampiantrano mpandahateny mihoatra ny 2,000 ary nandraisan'ireo mpankafy boky iray tapitrisa eran-tany nandritra ny folo taona lasa.
Any London, ZEE JLF ao amin'ny British Library dia mitondra soatoavina fototra iraisan'ny rehetra, demokratika ary fampidirana ao amin'ny karnavaly literatiora isan-taona any Jaipur any UK. Fotoana iray handrenesana ireo manam-pahaizana ambony mizara ny fahalalany momba ny lohahevitra isan-karazany toy ny fandrahonana ho an'ny tigra ary inona no mahatonga ny miliarderan'i India hifidy. Tsy mila mandeha mankany Jaipur intsony ny olona iray mba ho tratry ny adihevitra sy adihevitra mandresy lahatra, mampiady hevitra ary manazava. Azo inoana fa na aiza na aiza misy anao eto amin'izao tontolo izao, ny fetiben'ny literatiora malaza dia ho tonga amin'ny toerana akaiky anao.